I-5 Tricks yokusebenzisa iGoogle Play kwi-Android ngendlela engcono | I-Androidsis
Ivenkile yeGoogle Play ibalulekile kwi-Android. Kuba lisango lezicelo kunye nemidlalo yabasebenzisi, Inani elikhulu lezicelo njengoko sibonile. Nangona kwiimeko ezininzi singasoloko sifumana okona kulungileyo kumathuba amaninzi asinika wona. Ke ngoko, apha ngezantsi sikushiya namaqhinga anomdla kakhulu.
Enkosi ngala maqhinga uza kuthi ukwazi ukusebenzisa ngcono iVenkile yokuDlala kuGoogle kwi-smartphone yethu ye-Android. Into eya kukuvumela ukuba ufumane uninzi kuyo yonke imisebenzi ekhoyo kuyo namhlanje. Yintoni esinokuyenza ukuze siyisebenzise ngeyona ndlela ibalaseleyo?
1 Lawula imirhumo
2 Cima iiapps ezininzi
3 Cela ukubuyiselwa imali
4 Xela ii -apps ezinobungozi
5 Khangela uphononongo olungelulo
KuGoogle Play sinokulawula ngokulula yonke imirhumo ebhatalwayo esinayo ngalo mzuzu, into esele siyibonisile. Lo ngumsebenzi oluncedo kakhulu ukuba ubhalisile kwinkonzo okanye kwisicelo ekufuneka uhlawule kuso inyanga nenyanga. Ngale ndlela, uyazazi zonke iinkonzo ozibambe ngelo xesha, ezikuvumela ukuba ube nolawulo olufanelekileyo.
Ukongeza, ukuba kubonwa kufanelekile, ungacima nayiphi na kwezi ntlawulo ngqo. Ngaphandle kokungathandabuzeki ivumela ukusetyenziswa ngokulula kuGoogle Play. Eyona ndlela ikhululekileyo yabasebenzisi be-Android yokuba nolawulo olufanelekileyo lwemirhumo abanayo.
Cima iiapps ezininzi
Enye yezinto ezintsha zokubetha kuGoogle Play. Kwiimeko ezininzi, abasebenzisi banezicelo ezininzi kakhulu ezifakwe kwifowuni yabo ye-Android. Into ethatha ukuba ithatha indawo eninzi kakhulu kwisixhobo. Sele isaziwa ukuba inye indlela yokukhulula indawo kwesi sixhobo kukwenza cima iiapps. Ngoku, kunokwenzeka ukuba uyenze ngokuthe ngqo kwiVenkile yokudlala. Ukongeza, lo msebenzi uvumela cima ezininzi ngaxeshanye.
Kulula kakhulu ukusebenzisa umsebenzi, ovumela ngokuqinisekileyo sebenza ngokulula ngakumbi kwisicelo seGoogle Play kumnxaba. Ke, ukuba unezicelo ezininzi kakhulu ezifakwe kwifowuni yakho, oku kuyakuvumela ukuba ucime ngokulula ngakumbi. Indlela elungileyo yokufumana indawo encinci kwifowuni yakho. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngaphandle kwesidingo sokuba yingcambu.
KuGoogle Play sifumana izicelo ezihlawulelweyo, ekufuneka sizihlawule xa sifuna ukuzikhuphela kwi-smartphone yethu ye-Android. Nangona kunokwenzeka ukuba iapp ayisiyiyo le ubuyilindele okanye inika ingxaki yokusebenza kwifowuni yakho. Ke ngoko, ufuna ukubuyiselwa imali, kuba awonelisekanga koku kuthenga. Le yinto enokwenzeka, kuba kwivenkile yeapps sinelungelo lokubuyiselwa imali.
Nangona indlela indlela Umsebenzi wokubuyiselwa kwemali kuGoogle Play unzima. Kuba ixhomekeke ngaphezulu kwako konke ukuba siyakhawuleza na ukuodola ngokufanayo. Kule nqaku esidibanise nawe, kukho yonke imigaqo ekufuneka ithathelwe ingqalelo malunga noku. Isitixo Kukucela ukubuyiselwa imali kwiiyure zokuqala ezingama-48 emva kokukhuphela ye-app okanye yomdlalo kwi-Android. Ukuba kwenziwe ngaphakathi kweeyure ezingama-48, amathuba okufumana imbuyekezo aphezulu kakhulu. Kule meko phantse iqinisekile ukuba iya kufumaneka.
Xela ii -apps ezinobungozi
Ngelishwa, kuqhelekile Ezinye ii -apps ezinobungozi zingena kuGoogle Play. Kwezinye izihlandlo zamva nje esele sikuxelele ngazo enye i-malware ebekhona evenkileni. Xa oku kusenzeka, kukho abasebenzisi abakhuphela usetyenziso kwaye babe neengxaki. Kuhlala kunokwenzeka ukuba uxele le nto kuGoogle. Ke bayazi ukuba kukho iapps enika iingxaki, ukuze bayiphelise ngokusisigxina evenkileni.
Le yinto eyenziwe ngomsebenzi wengxelo, njengoko ubona kwifoto. Ngumsebenzi obaluleke kakhulu kuGoogle Play, onokuyisebenzisa ngokulandela la manyathelo. Ngexesha elizayo xa uhlangabezana ne-app enobungozi, yiya uthathe inyathelo njalo njalo. Nceda uGoogle ayisuse kwivenkile ngokukhawuleza okukhulu, ukunqanda abasebenzisi ukuyikhuphela kunye nokuba neengxaki.
Khangela uphononongo olungelulo
Abasebenzisi abakhuphele usetyenziso kuGoogle Play banokushiya uphononongo malunga nalo. Ngelishwa, amaxesha ngamaxesha kukho abantu abenza ingxelo engeyiyo, ndithetha izimanga malunga neapp ekuthethwa ngayo. Nangona silubona lonke utshintsho olwenziweyo kuphononongo, ukuze isivumele ukuba sibone ukuba ngaba umsebenzisi ukhuphe uphononongo olungelulo ngelo xesha. Le yimbali yotshintsho.
Eli nqaku liza vumela ukuba ubone utshintsho olwenziwe ngumntu kuphononongo lwabo kuGoogle Play. Ukusuka kwinto esinokuyibona ukuba ngaba kukho iinguqu ezenza ukuba sikrokre ukuba luphononongo lobuxoki kwivenkile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukukopela kwe-Android » Amaqhinga okusebenzisa iVenkile kaGoogle yokudlala ngendlela ebalaseleyo
Uyenza njani into yokuhamba kweGoogle Chrome kwi-Android
I-Samsung Galaxy S10 5G iya kuqala ukuthengisa ngo-Epreli 5